မိမိယာဉ်နှင့်တိုက်မိသည့်တိုင် အလျှော်ပေးစရာမလို…. – XB Media Myanmar
ဟုတ်ပီအဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုရှင်းရအောင်ဘယ်နှယ့်ကို့ကား/ဆိုင်ကယ်နဲ့ တခြားကား/ဆိုင်ကယ် ကိုတိုက်မိတာအလျှော်ပေးစရာလဲမလိုဘူး ….ဒါတင်မဟုတ် ….တဘက်လူေ သဆုံးသွားတာေ ထာင် ထောင်မကျဘူးရယ်လို့ ဟုတ်ပါ့မလားမောင်နေမျိုးသူရရ ယ်ပေါ့ …ကောင်းပီ ရှင်းရှင်း လင်းလင်းသိရဖို့ ဥပမာလေးတွေနဲ့ ပြရအောင်…..
အကိုက လမ်းမကြီးအတိုင်း သတ်မှတ်ထားတဲ့ယာဉ်ကြေကနေကားမောင်းလာတယ် ဒါမှမ ဟုတ် ဆိုင်ကယ်စီးလာတယ်ပေါ့…..အဲ့ဒီအချိန်မှာ လမ်းသွယ်ထဲကနေ ကား ဒါမှမဟုတ် ဆိုက် ကယ်တစ်စီးလမ်းမကြီးပေါ်မောင်းတတ်လာတယ်……တိုက်ပီ အဲ့ကား/ ဆိုင်ကယ်ကို အကို့ကား နဲ့အကိုတိုက်လိုက်တာ လမ်းသွယ်ကမောင်းတ တ်လာ တဲ့ကာစုတ်ပျက်သတ်သွားတယ်ဗျာ…..
အဲ့ယာဉ်မောင်းသူဘာလုပ်မလဲ အလျှော်တောင်းလာမလားတိုင်မလား ကြိုက်တာလုပ် အကိုဘာမှမဖြစ်ဘူး လျှော်စရာလဲမလိုဘူး ဘာကြောင့်လဲ ရှင်းပါတယ် ……
ယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းသူကမှားတာလေ သူခံပေါ့…..နောက်ဆုံး အဲ့ယာဉ်မောင်းသူ သေသွားတယ်ထားဗျာ လူသေလို့အမှုဖွင့်လိုက်ပီ အကိုဘာမှမဖြစ်ဘူး …..အဲ့သေတဲ့သူတရား ခံလေသေလဲသေဆုံးသေး ဒီမှာ တရားခံဆိုပီးနာမည်ကကျန်နေခဲ့ရသေးတယ် ….ဘာကြောင့် လဲ စောစောကပြောသလို သူက ယာဉ်စည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်း မှားခဲ့တာကို မှားတဲ့သူတရား ခံလေဟုတ်ပီ…..
နောက်တစ်မျိုးပြောကြရအောင်.အကိုအိမ်ကနေကား/ ဆိုင်ကယ်စီးပီး ထွက်လာတယ်လ က်ရှိ အကိုမောင်းနေတဲ့လမ်းက ပေ ၁၀၀ ကျယ်တယ်ဆိုကြပါစို့…..အဲ့လမ်းကို အကိုစိတ်ထဲကနေ အလယ်မျှဉ်မှတ်ပီး ပိုင်းကြည့်လိုက်လမ်းအလယ်ခေါင်တည့်တည့် နှစ်ပိုင်းပိုင်းခြား ကြည့် လိုက် ဗျာ…..ဟိုဘက် ၅၀ ဒီဘက် ၅၀ ပေပေါ့ ဟုတ်ပီးနော်…..
အဲ့ အကိုက အကို့ဘက်မှာရှိတဲ့ တဝက် ၅၀ ပေထဲက မောင်းနေပြီး အဲ့ဒီအချိန် မျက်နှာချင်း ဆိုင်ကနေ မောင်းလာတဲ့ ကား ဒါမှမဟုတ် ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဟာ သူဘက်မှာရှိတဲ့ တဝက် ၅၀ ပေထဲတင်မဟုတ်ဘဲ လမ်းမအလယ်ခေါင်ကနေ ကိုဘက်တဝက် ၅၀ ထဲထိကျော်မောင်း လာ လို့တိုက်ပီး အကို့ကား/ဆိုင်ကယ်နဲ့သေသွားတယ်ဗျာ ပွဲချင်းပီးပဲ….ဘာမှ မတုံလှုပ်ပါနဲ့ ရှင်းရှင်းလေးပါ သူက လမ်းစည်းကမ်းမှားတဲ့အတွက် သူတရားခံပါ ….ကဲယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်း ဘယ်လောက်အသုံးဝင်လိုက်သလဲ ….ကိုကမှန်နေရင်ပီးပီ …..
အဲ့လိုပဲ တဘက်လူကလဲ ဒီစည်းကမ်းတွေကိုနားလည်ထားရင် ပီးပီပေါ့နားမလည်လို့ စည်း ကမ်းမဲ့လို့ဖြစ်ရင် မှားတဲ့သူခံယာဉ်ကြီး ယာဉ်ငယ် sorry အဲ့ဒါတွေက လောင်းလောင်း အဂိုး မှာပါ ခုမရှိတော့ပါဘူး….ဒါက ဥပမာ နှစ်ခုပဲရှိသေးတယ်…. ကုန်မှာတောင်မဟုတ်ဘူး ….ဒီေ တာ့ ကျွန်တော်တို့ ဘာသိထားကြရမလဲယာဉ်စည်းကမ်း လမ်းစည်းကမ်းတွေ သိထားရပါ့ မယ်…..အဲ့လိုကြိုသိထားမှ အန္တရာယ်လဲကင်းမယ် ဖြစ်ခဲ့ရင်လဲ ဖြေရှင်းနိုင်မယ်ပေါ့…..
Credit:Nay Myo Thu Ya
အိချောပို ရဲ့ ပါတိတ် ကြော်ငြာ ရိုက်ကူးနေတဲ့ video File